Umlawuli weMvukelo yokuGqibela uMargaret Klein Salamon: "Inqanaba elilandelayo kukuthatha inyani ukuba iyinyani": UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Oktobha 2019	• 6 Comments
Unobangela woVukelo oluzimeleyo kukho umbutho oqeqeshiweyo njengoko sisazi kwimvukelo enemibala ebisoloko isetyenziswa ngu-CIA amashumi eminyaka ukugxotha "oothunywashe" kwaye bafake inguqulelo yaseMelika yedemokhrasi. Yindlela 'yemiboniso yoxolo' kwimibhiyozo yemini-yasebukhosini enomculo omninzi kunye neendibano ezinobubele ezinesidima, kunye neenkampu ezininzi ezimnandi. Isixhobo esibalulekileyo ekwakheni inguquko enjalo yimithombo yeendaba zentlalo kunye neenzame zabadlali abadumileyo. Kule meko, luhlaselo lombala lwehlabathi, kuba ukusasazeka kweenguqu kwimozulu yeyona nto ibalulekileyo kurhulumente wehlabathi.
Udinga ingxaki yehlabathi ukubonelela ngesisombululo sehlabathi. Kuqala ke, iinkampani zakho ezinkulu zeoyile mazize neeoli ezininzi ezingacacanga kwimizi-mveliso yeplasitiki kwaye zifake endaweni yazo zonke iiglasi zeglasi kunye nebhotile yobisi ngeplastiki kwaye iqinisekise ukuba iilwandlekazi zityhutyha zizele ziiplasitiki. UDan yenza nengxaki ye-CO2 njengonobangela wokufudumala kwehlabathi, ibonisa ezinye ii-walrus ziphosa amatye apho oko kuthiwa kukunqongophala ngumkhenkce ufake intombazana eyomeleleyo edlala ngeemvakalelo ”Unoyolo njani!"Kwaye Kees selungile.
Yonke icwangciswe ngumbutho wehlabathi obenziwa ngokomsebenzi. Utshintsho lwenene lobuchule njengoko sisazi kwi-CIA. Iwebhusayithi theclimatemobilization.org isebenza njenge portal yoMbutho wokuHamba ngeMozulu kwaye kuyacaca ukuba kukho imali enkulu emva kwayo. Iiwebhusayithi zemithombo yeendaba ezisetyenziselwa ukunciphisa ukubonelela ngemali ikakhulu imipu embalwa, kodwa qwalasela ukuba kukho umatshini one-oyile entle emva koku kwaye awusebenzi lonke kumavolontiya. Nangona kunjalo, awusoze uzibone ezi zinto zingena, kuba leyo yimigaqo yeenkonzo eziyimfihlo: yimfihlo.
UMargaret Klein Salamon yingcali yengqondo yengqondo, ngoko uyazi kancinci malunga nokudlala i-psyche yomntu. Yonke into yenzeka phantsi komxholo othi "Ndiyilungele imeko yokusingqongileyo", kodwa masibuze inenekazi elinjalo ikopi yesiliphu salo somvuzo okanye iiyure ezingenamntu kwisikhundla sakhe njengoMlawuli oLawulayo woKhathalelo lweMozulu.
Kwinkcazo engezantsi sibona indlela amehlo efileyo yale nto ingabonakaliyo kwikhamera ikhanyisa intetho yakhe eqhubekayo malunga nokusindisa imozulu. Ucacisa ngokweenkcukacha ezinkulu ukuba indlela yeqela eliDlulayo ekuNgqinelweni liqhuba umkhankaso osekwe kwisayikholoji. Siva ingcaciso yenkohliso apha. Emva koko hlamba umzuzwana ukuya kwi-11: umzuzu we-30 ukuva inkcazo yenyaniso yala manenekazi kunye neendoda. "Sithetha inyani emva koko senze njengenyaniso", Kuthethwa nguNkosikazi Salamon phaya. Ewe kunjalo, abanye baya kuthi uthetha ukuba makenze ngokwenyani, kodwa enyanisweni yonke intetho yakhe ijikeleze ukoyikiswa kwabantu, emehlweni akhe, ongothuki ngokwaneleyo malunga nemeko umntu azifumana eyiyo. Ngapha koko, uyachaza ukuba umbutho wasekwa ukuba uvuse uloyiko ebantwini. Olo loyiko alunazizathu ngokupheleleyo kwaye bayazazi ngokwabo, kodwa ibali ngoku kukuba "kufanele babhangiswe" kuba kungenjalo akukho nto yenzekayo koorhulumente. Ugqirha wengqondo osebenzela iklabhu yedemokhrasi elolu hlobo uluncedo, awucingi?
Lo mbutho ukwasetyenzwa ngokufanelekileyo eNetherlands. Umfundi wale ndawo waya kujonga iVondelpark kwaye wabona indlela umbutho uqokelela kwaye ufundisa abathathi-nxaxheba malunga nombutho wombutho kunye nendlela yokusebenza. Kucacile ukuba inguqu ye-Gene Sharp Method Revolution yehlabathi jikelele kwaye ulutsha luye lwaqeshwa ukuze luqhubekise i-ajenda, bengazi ukuba bemba amangcwaba abo kwaye babiza urhulumente wamapolisa wehlabathi ukuba azenzele ngokwakhe ingxaki esele ikho. Hlawula ngaphezulu, lawula yonke into oyithengayo kwaye uyithengise rhoqo ngenkqubo yamapolisa yehlabathi jikelele (China).
Sinikela ubungqina obunye Indlela yokuguqula umbala ye-Gene Sharp (Indlela eyaziwayo ye-CIA), kodwa ngeli xesha kwinqanaba lomhlaba jikelele. Sayibona indlela efanayo ngexesha lemfazwe yaseYugoslavia, imvukelo yase-Egypt naseUkraine nakwamanye amazwe amaninzi kwihlabathi liphela. Yeyona ndlela icociweyo isetyenziswayo ngoku e-Hong Kong. Sikwabona indlela efanayo emva koShukumo lweNtshabalalo. Le ndlela ihlala ixoxwa rhoqo apha kule ndawo ngexesha loQhushululu lweUkraine, kodwa ngenxa yesizathu esilula ndibhala ividiyo apha yenenekazi elichaza indlela eyiGene Sharp. Jonga amakhonkco akweli nqaku ukuze ufumane ulwazi lwangemuva malunga nesimo sezulu.
Ngaba awukholelwa ukuba sibona indlela ye-Gene Sharp CIA? Emva koko funda isicatshulwa esingezantsi:
Isitshixo sokuqala esikhulu seza ngohlobo lwenkcazo eyanikezelwa nguGail Bradbrook, omnye wabasunguli be-Extinction Rebellion (i-XR ngokufutshane - iqela eliphambili laseBritani elalixhasa ukuHanjiswa kweMozulu) kwi-Off-Grid festival kwiminyaka eliqela eyadlulayo, emkhuthaza Uvelwano lovukelo / Ukunyuka! Umxholo / Iimpawu. Kuyo, wayebizwa ngokuba ngu-Otpor !, abo babethelelekele kakhulu kwi-Serbia 'Bulldozer Revolution' okanye i-2000, 'njengeqela nje labantwana'. Ubuye athethe kamnandi okanye Gene Sharp, amacebo abo asetyenziswa kuloo nto kwaye nganye yezi zinto zibizwa ngokuba 'kukutshintsha kombala' ezathi kamva zatshintsha kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba, zaphelela kwiArabhu Spring, eyathi ikwavuselela abaninzi ukuba bathathe inxaxheba kwi-Occupy intshukumo. (funda qhubeka apha ..)
Uludwe lwekhonkco lovimba: notalotofpeoplenowthat.wordpress.com, akukho ndawo
tags: Bradbrook, mozulu, umqondisi, ukuphela, eziziimbalasane, Gail, geni, Klein, Margaret, Ukuhamba, abaseki. abaseki, Ukuvukela, gu qulelo, Salamon, Sharp, le
10 Oktobha 2019 kwi-12: 06
Jonga kwakhona ividiyo kunye noqhakamshelwano lukaJeffrey Epstein nelebhu yemithombo yeendaba ye-MIT kunye nendlela ye-Gene Sharp, kubandakanya nokunxibelelana nokupheliswa.
10 Oktobha 2019 kwi-12: 12
Asinazintloni ngazo. Sisebenzisa nje indlela ecacileyo ye-Gene Sharp kwaye siyizise njengento elungileyo, ngaphandle kwengxelo yokuba senzelwe ukufaka inkqubo yelizwe lonke yamapolisa. Yindlela ye-CIA kwaye umbutho wenza ngathi ngoku usebenzisa le ndlela njengezinyathelo zabemi abazenzekelayo (kwaye abantu bazakuhlala kwakhona apha):
15 Oktobha 2019 kwi-13: 33
10 Oktobha 2019 kwi-20: 04
Inkxaso mali kwimisebenzi enjalo yenziwa yenzeke kunye ne-FASB 56 ye-accounting esemgangathweni, eyenza ukuba kugcinwe ukuhamba kwemali kungabonakali. Ngale nto, ulwabiwo lwemali yerhafu ngoko ke isemthethweni.
I-FASB 56 = IMISEBENZI EQINISEKILEYO "ivumela iiarhente zikarhulumente" ukuguqula "iingxelo zezimali zikawonkewonke kwaye zihambise inkcitho ukusuka kwilayini ukuya kwenye. Ikwaveza ngokucacileyo ukuba i-arhente yomdibaniso iyala ukubala abahlawuli berhafu ukuba kwaye xa iinguqu zezemali zikarhulumente zitshintshiwe.
Iirhafu ziqokelelwa kwindawo ebizwa ngokuba ngohlahlo-lwabiwo mali, ethi, nangona kunjalo, ingathethi konke malunga nokuma kwemali kweziko likarhulumente.Ngoko ke yongeza iNgxelo yeAccounting yeMali kwiFASB 56 esemgangathweni kwaye unokuxhasa ngemali ii-ops ezinkulu ezimnyama.
I-CAFR iseti yeengxelo-mali zikarhulumente wase-US kubandakanya ingxelo yezemali yelizwe, kamasipala okanye enye into karhulumente ehambelana neemfuno zobalo-mali ezibhengezwe yiBhodi kaRhulumente yeMigangatho yeNgxelo (i-GASB).
11 Oktobha 2019 kwi-15: 32
I-ME iphosa umdlalo webhola emva kwemini.
Ngoku i-ME yayiyiveki epheleleyo ngaphambi kokusa, yonke imihla, hayi emva kwemini kunye ne-1, akukho ndawo zininzi.
Ndidibanise zonke iibhasi ze-ME ngetanki ledizili, amahashe, iibhasi zamapolisa, amapolisa kwii-helikopta zeMoto? njl njl njl
Ukuvukela kuya kuwuhlawula njani lo mbuzo unomdla
12 Oktobha 2019 kwi-15: 54
NgoMgqibelo Amsterdam 12 Okthobha 2019
Abakhweli ababekhathaza abantu ngokumisela iindonga ezizodwa (ngokwabo) ngeflegi ukuba ibekwe okanye hayi kwiflegi ifakwe namhlanje e-12 Oct kwindawo, apho wonke umntu angangena ezixhasweni km kwaye angenelele iiyure azenzileyo. Jonga ikhonkco kwi-telegraaf apho baphinde bafumana iqonga elikhulu.
Ke wonke umntu uye endlwini yakhe efudumeleyo okanye kunjalo
Qhubeka nokuthenga eKalverstraat. I-ME kuye kwafuneka isebenze ixesha elingaphezulu namhlanje njengoko ababhemisi behamba ezitalatweni zeKomkhulu iveki yonke.
Ii-ambulensi kunye nee-brigade zomlilo kwakufuneka zenze into ebambekayo, okanye ngenxa yoku okuxamisekileyo kuye kwaba kubulalayo okwangoku.
Ukutsala umnxeba kwisithuthi esineendleko zokuhlawulelwa imali kukuhlawulisa isohlwayo, ukuhamba ngebhayisekile ecaleni kwendlela kukuhlawulisa isohlwayo
ukuxhoma iflegi yamaNazi kuya kukuhlawula isohlwayo.
Imvukelo iyaphela, kodwa ke ijike, iye yangqinwa inesikhundla
Kukwangqinwe ukuba ihlaziyiwe. Ke i-ajenda yorhulumente ngokwayo iyasebenza.
Ngaba inokubonakala nangakumbi!
« I-Turkish ikhubekisa i-Syria i-harbinger kwi-Europe
Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.978.651
UPeter Westerhout op "Inyani njengoko siyibona" ​​incwadi uMartin Vrijland ngoku ikhoyo
SalmonInClick op Uqhanqalazo lwamaFama: Amafama anikela ingqalelo ukuba iinkokheli zakho zoqhanqalazo azingobameli bakaRhulumente
Riffian op URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu
Kutheni ufuna ukwazi oku? op Iyingozi kangakanani i-5G kwaye ifakwe ngasese njani
UMartin Vrijland op URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu